Ukusakazwa bukhoma kweJiake Wire Mesh Machinery kuyeza ngoMashi, wamukelekile ukubuka
Sizoba nokusakazwa okubukhoma bukhoma komshini wocingo oshiselwe ngo-Mashi, futhi sizokuthatha ukuthi ufunde kabanzi ngefektri yethu yeJiake, futhi sizokuthatha ukuthi ufunde kabanzi ngomshini. Main wire anezikhala imishini incazelo, kuhlanganise wire anezikhala umshini, inkukhu yezinyoni wire anezikhala umshini, ch ...
Ngokwedokhumende ekhishwe nguMnyango Wezohwebo wesiFundazwe i-Hebei ngoDisemba 8, 2020, inkampani yethu yafakwa ohlwini lwamabhizinisi okukhonjiswa komngcele we-e-commerce ezingeni lesifundazwe aklonyeliswe nguMnyango Wezohwebo weSifundazwe saseHebei. Kunamabhizinisi angama-24 akhethwe ku ...
Jiake wire anezikhala imishini abahlinzeki zihlale nawe!
Kuzoba umkhosi wethu omkhulu ezinsukwini eziyishumi— Umkhosi Wentwasahlobo. Wonke umshini ophelile uzogcina ukulayishwa kwamakhasimende ethu phakathi namaholide ethu, ukusiza amakhasimende athole umshini ngaphambi kwesikhathi. Futhi kunezinye izindaba ezinhle. Umphakathi waseShijiazhuang ucishe uvulelwe manje. Singabona ...
Ngesikhathi sokulwa nobhubhane, sinikeza izinsizakalo amahora angama-24 ngosuku
Noma ngabe bucayi kangakanani ubhubhane noma ukuthi lukhulu kangakanani lolu bhubhane, asikwazi ukumisa ukuxhumana okushelelayo phakathi kwethu namakhasimende ethu! Yize siphumule ekhaya ngenxa yalo bhubhane, lokhu ngeke kuthinte ikhono lethu. Lapho usebenza ekhaya, osebenza nabo enkampanini basakhonza amakhasimende ephelele ...
Indlela ukukhetha zizalela inkukhu yezinyoni umshini net?
Sinomshini osetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni imboni yokuzalanisa, engathatha indawo yemishini ye-wire mesh, futhi ingasetshenziswa futhi ekukhiqizeni amakheji enkukhu, amakheji onogwaja, amakheji eminki, amakheji enkukhu, amakheji e-fox, amakheji wezilwane kanye neminye imikhiqizo. Inkukhu yethu yezinyoni anezikhala Welding mach ...
Ungaqala kanjani ifektri entsha yokwenza imikhiqizo yocingo?
Amanye amaklayenti asibuze: Ngiyisiqalo esisha embonini yocingo, ungiphakamisa ukuthi ngiqale ini? Kumthengi omusha, uma ungenaso isabelomali esanele, ngiphakamisa ukuthi ucabangele izinto ezilandelayo: 1. Umshini wocingo wokuxhuma othomathikhi ngokugcwele; Wire ubukhulu: 1.4-4.0mm GI ucingo / PVC wire Mesh ukuvulwa siz ...
Cold kweqa steel bar ribbed umshini
Cold ugingqe steel bar ribbed umshini isetshenziswa ukugoqa ebusweni steel imigoqo nxazonke ukwakha izinhlangothi ezimbili noma ezintathu inhlendla; Impahla eluhlaza: ikhaboni lensimbi eyindilinga yokusetshenziswa kwebha: Lo mshini ugoqa ubukhulu bezinsimbi ezi-3-8mm, busetshenziswa kakhulu esikhumulweni sezindiza somgwaqo, embonini yezokwakha; Thi ...
Ulayini wokukhiqiza we-BRC
I-BRC mesh ithandwa kakhulu embonini kakhonkolo; inendwangu yokuqinisa i-mesh, i-galvanized welded mesh, i-gusset ishiselwe i-mesh yesikrini kanye ne-gabion mesh eshisayo ... njll; Njengoba Wire Mesh imishini womshini, singakunika isixazululo ephelele ngokuvumelana nemfuneko yakho; 1. umshini wenqubo yocingo; ...
Umshini we-anti-glare mesh
I-anti-glare mesh ingenye yezintambo ezithandwayo zocingo, ezisetshenziswa kakhulu njengebhande lokuzihlukanisa lomgwaqo omkhulu, 1. Kuyadingeka ukuthi uvule ugongolo oluphakeme lapho ushayela ebusuku emgwaqeni omkhulu, ozoba nokukhanya okukhulu emehlweni omshayeli futhi kuthinte nokuphepha kokushayela. Ibhande eliluhlaza lingavimba i-li ...
Ashiselwe anezikhala umshini ukulayisha
Namuhla sisanda kuqeda ukulayisha isethi eyodwa eshiselwe i-mesh machine yamakhasimende e-Afrika; 1. Lo mshini oshiselwe nge-mesh unengxenye ehlukile ye-mesh roller ukuze umshini wokushisela ukwazi ukuqhubeka usebenza ngenkathi isisebenzi sisusa okokugcina okuphelile kwe-mesh roll kusuka kudivayisi ye-roller; 2. lokhu ashiselwe anezikhala umshini c ...
Ukuqondisa izintambo nomshini wokusika
I-Wire straightening & umshini wokusika ungenye yemishini yenqubo yocingo edumile; Sinezinhlobo ezahlukahlukene zokulungisa nokusika umshini ongalungela ububanzi obuhlukahlukene bocingo; 1. 2-3.5mm Wire diameter: 2-3.5mm Cutting length: Max. 2m Isivinini sokusika: 60-80 imitha / iminithi Ifanele ...
Ukulayishwa komshini wokudweba ngocingo oqondile
Izolo, sisanda kuqeda ukulayisha isethi eyodwa yomshini oqondile wokudweba izintambo; Umshini wokudweba wocingo oqondile, wenzelwe ukudweba okuqondile noma okuphambukayo kocingo ukuhlinzeka ngokudonsa okungcono, senzelwe ngokwesicelo samakhasimende; Inlet wire diameter 5.5mm, outlet wire diameter is ...